इन्टर बैंक - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: लक्जमबर्ग - विश्वको अन्तिम ग्रान्ड डची
अर्को पोस्ट: के रीगा मा यात्रा? शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया
पोष्ट गरिएको 23 अक्टोबर 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
1- म किन बान्को इन्टर सिफारिस गर्दछु?
यदि तपाईंलाई कुनै कारणका लागि ब्राजिलियन जाँच खाता चाहिएको छ भने, चाहे तपाईं यहाँ ब्राजिलमा बस्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, वा अध्ययन गर्न आउनुभएको छ, चाहे पर्यटनको लागि हो, वा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउन वा प्राप्त गर्न। सुझाव यो छ कि तपाइँले तपाइँको खाता बान्को इन्टरमा खोल्नुहोस्। यो सबै डिजिटल हो र तपाईले मर्मत शुल्क, कार्ड बक्यौता, वा बैंक शुल्क तिर्नुहुन्न। खाता नि: शुल्क छ र मर्मत लागत शून्य छ।
2- के यो विदेश बैंक कार्ड विदेशमा प्रयोग गर्न सम्भव छ?
हो, डिजिटल खाताको साथ उनीसँग एक क्रेडिट कार्ड पनि छ। कार्डको ब्यानर मास्टरकार्ड हो। र तपाईले तपाईको अन्तर बैंक कार्ड विदेशमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा मा तपाईं क्रेडिट समारोह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक्सएनयूएमएक्स- र म किन यी सबै बान्को इन्टरमा किनमेल गरिरहेको छु?
किनकि मैले यो प्रयोग गरें र यसले मलाई धेरै पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ (अनावश्यक शुल्कको साथ) र समय (लामबद्ध र बैंकिंग) ताकि म अधिक यात्रा गर्न सक्दछ। र मलाई लाग्छ यसले तपाइँलाई उही तरिकाले मद्दत गर्दछ। र यो एक यात्रा ब्लग हो, यात्रा सल्लाहहरूको साथ, मैले सोचे कि यो वित्तीय सल्लाह सान्दर्भिक हुन सक्छ!
उदाहरणको लागि, मसँग मेरो डिजिटल खाता हुनु अघि मैले कागजात वा टीईडी शुल्क र "सेवाहरूको टोकरीहरू" तिर्नु पर्ने थियो। जुन मैले कहिले सोधेको थिएन तर मेरो पुरानो बैंकले मलाई धक्का दियो। हरेक वर्ष उनीहरूले यो मेरो बान्को do ब्राजिल क्रेडिट कार्डमा राखे र मैले धम्की दिन समय खेर फाल्नु पर्थ्यो जब सम्म उनीहरूले त्यो प्राप्त गरेनन अनुचित शुल्क। अर्को बैंक खातामा स्थानान्तरण भएको अवस्थामा TED को 12,00 तिर्ने बाहेक। प्रति महिना शुल्क $ 30,00 मा आयो यो धेरै कष्टप्रद थियो। प्रत्येक वर्ष उनीहरूले मबाट R $ 360,00 केवल "बैंकिंग शुल्क र शुल्कहरू" को साथ लिए। र त्यो धेरै छ!
मैले पहिलो पटक बानको इन्लाई भेट्टाए सम्म, हरेक "पहिलो पटक मल्लाह" डराए, के यसले काम गरिरहेको छ? के यसले वास्तवमै काम गर्दछ? के यो केही महिना पछि चार्ज हुन गइरहेको छ? मैले परीक्षा दिएँ र मलाई यो मनपर्‍यो। र यो पहिले नै केहि वर्ष पुरानो हो र त्यहाँ कुनै अतिरिक्त शुल्क थिएन। त्यसैले म बानको इन्टरमा बसाई सकें र वर्षौंको धेरै पैसा बचत भयो, यति धेरै कि यो अर्थव्यवस्थाको साथ म मेरो अघिल्लो यात्राको तालिका बनाउँदै छु र भर्खर आइपुगेको नयाँ कार्डको परीक्षण गर्नेछु।
योसँग सम्पर्कविहीन टेक्नोलोजी छ, (यसको मतलब तपाई केवल कार्डलाई मेसिनको नजीक पाउनुहोस्, पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसले बिल भुक्तान गर्दछ)।
यो एक नयाँ टेक्नोलोजी हो, यसले बैंकले वास्तवमै एक नयाँ दर्शन ल्याएको छ र नयाँ प्रविधिहरूलाई अँगाल्दै आएको देखाउँछ।
4- कार्ड बाहिर
मोबाइल अनुप्रयोग, जो अन्तर बैंक प्रयोग गर्नेहरूका लागि अनिवार्य छ किनकि यसको कुनै शाखा छैन, यसले राम्रो अनुभव ल्याउँदछ।
यो एपमा नै मार्केटप्लेस (खरीद गर्न ठाउँ) छ जुन तपाईंलाई त्यहाँ रेजिष्टर्ड कम्पनीहरूबाट खरीद गर्नेहरूका लागि तपाईंलाई क्यासब्याक दिन्छ। यो थोरै जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो छैन। फिर्ती सरकारको कानूनी नोट कार्यक्रम भन्दा राम्रो हो, र पूर्व-दर्ता आवश्यक पर्दैन, केवल "मल" मा अनुप्रयोग मार्फत खरीद गर्नुहोस्।
ठिक छ, सबै फूलहरू होइनन्, नकारात्मक बिन्दु भनेको माइल र एयरलाइन्स टिकटमा स्थानान्तरण गर्न सक्षम नहुनु हो। मेरो लागि यो मुख्य बेफाइदा हो।
अर्को डेबिट खातामा तालिका भुक्तानको मुद्दा हुनेछ। केही कम्पनीहरूले यो विकल्प सक्षम गर्दैन। हुनसक्छ यो उहाँसँग साझेदारीको अभाव हो। उदाहरण को लागी, म ब्राजिलिया बाट छु र CEB को बिजुली बिल तिर्नु पर्छ। केही कारणहरूले गर्दा म यो खाता डेबिट गर्न सक्दिन। म बुझ्दछु कि बैंक मिनास गेरैसबाट हो, जुन अर्को राज्यबाट हो र ब्राजिलियामा अझ थोरै ज्ञात छ। तर यो खाता डेबिट गर्न सम्भव छ। हुनसक्छ भविष्यमा यो सम्भव हुनेछ।
यस इन्टर बैंक विज्ञापनको लागि म कित्ति कमाउँदै छु?
हो, म बैंकले लिने शुल्कले समान दर कमाइरहेको छु! 😆 र किन मैले यस बारे ट्राभल ब्लगमा कुरा गर्ने निर्णय गरें? किनकि यो टिपले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ। अवश्य पनि यदि यो पोष्ट देखे पछि बान्को इन् यस ब्लगको लागि प्रायोजनको केही फारम हेर्न चाहन्छु भने म यसको सराहना गर्छु। तर प्राथमिकता अझै एक माईल प्रणाली को लागी हुनेछ। यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ!
डिजिटल बैंकि + + मार्केट प्लेस अनुप्रयोग + शून्य दर + लगानी जसले शुल्कविना बचत भन्दा बढि उत्पादन गर्दछ = इन्टरब्याक।
तपाइँको नि: शुल्क बैंक खाता खोल्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: इन्टर बैंक
(पुनर्निर्देशित लिंक मेरो अनुप्रयोगको मित्र आमन्त्रितको रूपमा समान हुनेछ)।
म यहाँ छु, र यदि तपाईं यसलाई कमेन्टमा छोड्न चाहनुहुन्छ भने यदि यो टिपले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ वा यदि कुनै अन्य हराइरहेको पोइन्ट छ भने। अंगालो 😎